Njengomkhiqizi ohamba phambili emhlabeni we-molecule encane ye-antiticancer reagents nama-kinase inhibitors, i-Cofttek inikeza izinkulungwane zezinhlanganisela zamanyuvesi, izinkampani zokwelapha kanye nezikhungo zokucwaninga ngomuthi. Emkhakheni wezocwaningo lwezokwelapha, uCofftek unikezela ngokwezifiso, ukuhlanganiswa nokukhiqiza imikhiqizo ephezulu. Sisebenzela ukwakha iqoqo lezwe eliphelele kunawo wonke lama-molecule amancane anticancer. I-Cofftek inenzuzo enkulu kakhulu ekuthuthukiseni amakhemikhali, ukulawulwa kwekhwalithi, ukuphathwa kwephrojekthi nokumaketha ...
"I-Cofttek yi-ISO 9001: I-2008 eqinisekisiwe futhi yonke imisebenzi yebhizinisi layo ihambisana ngokuqinile namazinga womhlaba wonke wokuphatha ikhwalithi."
Abaholi bezinkampani zenkampani bonke banezidakamizwa emakhemikhali eziphilayo. Ngaphezulu kweminyaka engu-10 yokusebenza okusebenzayo emkhakheni wezolimo zamakhemikhali eziphilayo zamakhemikhali. Okuhlangenwe nakho okucebile ekhemistini yokuhlanganiswa, imithi yamakhemikhali, ukuphathwa kwezinto zokwenza imithi kanye nokuphathwa kweprojekthi. Ngaphandle kwe-80% yamathimba wokukhiqiza emafenini asesidlangalaleni aneziqu ze-bachelor, kanti ingxenye yawo inezinga lemfundo. Bonke bangabalingani embonini.